Gịnị mere ndị Binance Exchange na mgbe ọnụ ekwegasịrị amalite - Blockchain News
Gịnị mere ndị Binance Exchange na mgbe ọnụ ekwegasịrị amalite
N'agbanyeghị na nkwa, Binance mere na-aga online ụtụtụ. Ihe karịrị otu ụbọchị ago, technical malitere ọrụ na ngwaahịa mgbanwe, nke kwesịrị naanị iduga a “nwa oge iju ke arụpụtaghị,” ma mechara kwụsị ọrụ nke mgbanwe na dọkpụụrụ na maka ihe ebighị ebi oge. ụnyaahụ, Binance CEO Changpeng Jao ​​dere na Twitter na e nwere na-atụghị anya ihe isi ike na-edegharị data, na ọ na-achọ a re-mmekọrịta nke nchekwa data, nke ga-ọtụtụ awa.
na 8.00 na Berlin, Jao otu ugboro ọzọ kwuru na ọnọdụ, na-asị na mmepe na-agbalị atọ ụzọ mmekọrịta, dị iche iche na-agba: 1-2 awa, 5 awa na 9 awa karị. N'oge a, o doro anya na ngwa ngwa ụzọ na-arụ ọrụ. Dị ka ọhụrụ ọmụma, na “ikpeazụ data nkwado” ugbu a, resumption nke trading na-atụ anya na 15.00 na Berlin. N'ime otu awa tupu ngwaahịa mgbanwe bụ online, ọrụ ga-enwe ike iji kagbuo iwu. Na mgbakwunye, otu mara ọkwa na a na-achụ ekele maka “nọgidere na support”, mgbanwe ga belata ọrụ 0.03% kwa azụmahịa ruo mgbe February 24.
N'agbanyeghị eziokwu na Changpeng Jao ​​ugboro ugboro kwuru na Exchange bụ offline nanị n'ihi na nke teknuzu ọrụ, na ekweghị na hacker agha, na ụfọdụ ndị ọrụ ka na-eche na ọ bụ a hack. Ọ kachasị, ihe si na mgbanwe na-choro John McAfee, na-ekwu na “nweghị ụlọ ọrụ ka kwetara na hacker agha ruo mgbe ọ manyere.” Abalị ụnyahụ, McAfee dere ya Twitter na ọ “na-adịghị agbalị kụrụ FUD,” ma ọ na-enweta ọtụtụ nke ozi ihe ọmụma banyere hacking na ngwaahịa mgbanwe. Na post na mmasị a nseta ihuenyo, n'okpuru nke, n'okpuru Binance logo, mgbanwe kwuru na-ekweta na ya na ọ na a wakporo. Na ọ bụ ezie na onye na-akwado Makafi, ọtụtụ ebubo kaadị ọkachamara nke unsupported ọmụma na dubious na-egosi: “The picture zitere ụfọdụ” odo “otu – ya mere na ị na-egosi eziokwu?”, “Mgbe nụrụ Photoshop? matured, “” ị a nche ọkachamara. ”
Makafi siri ọnwụ na ọ “dị nnọọ jụrụ ajụjụ” na dị ka a nche ọkachamara maara na “ma ọ bụrụ na ndị agha mere na mgbalị iji laghachi ego e weere ozugbo, Ohere nke na-agbake ha na-ebelata ka efu n'ime 24 awa.” Otú ọ dị, Binance CEO, onye zara ọtụtụ tweet, kwuru na programmer ka “ekesa FUD”, na obi ike: “Anyị ga-egosi na ị na ha hiere ụzọ.” Na nzaghachi ebubo, Binance posted a tweet na-akpatụbeghị bitcoins na Ethereum adreesị:
Ọ bụghị na-agbalị na-agbasa FUD, ma m natara ọtụtụ akụkọ dị ka nke a. M na-nnọọ na-agbalị ịghọta. Dị ka a nche na-eme nchọpụta, M maara na ikike na hacks bụ nnọọ ihe dị mfe na-edozi ma ọ bụrụ na nyochaworo ozugbo. Days mgbe e mesịrị-ebuli ozi site iwu nke manitude. pic.twitter.com/u1PL9Z4tGf
Gịnị mere ndị Binance Exchange?
"Bitcoin okûnam massively,...
Previous Post:Canadian kaadị mgbanwe Coinsquare ewelite $ 30M
Next Post:Coincheck ọkwa refunds amalite izu